Nsọpụrụ anyị na-asọpụrụ nne anyị nwanyị: Ozi Medjugorje na ite ime | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Izogide Nwanyị Nwanyị Anyị: Ozi Medjugorje na ite ime
di Paolo Tescione - Julaị 24, 2020
Septemba 1, 1992
Ime ime bụ nnukwu mmehie. To ga-enyere ọtụtụ ụmụ nwanyị eteworo aka. Nyere ha aka ịghọta na ọ bụ ihe nwute. Gwa ha ka ha juo Chineke mgbaghara ma gaa nkwupụta. Chineke dị njikere ịgbaghara ihe niile, ebe ebere ya enweghị njedebe. Umu nnem, ghere oghe maka ndu ma chebe ya.
Septemba 3, 1992
Umuaka ndi anwu n’ime onu ugbua dika ndi mo-ozi nebe oche-eze Chineke.
Machị 2, 1999
“Ọtụtụ nde ụmụaka na-anwụ site na-ete ime ahụ. Ogbugbu nke ndị aka ha dị ọcha emeghị naanị mgbe amuchara Ọkpara m. A ka na-ekwugharị ya taa, kwa ụbọchị ».
EKPERE EZIN PRLỌ OFM CHAKA EGO NA-EBURU EGO
N’aha nke Nna, Ọkpara na Mmuo Nso.
Nna Nke puru ime ihe nile ma di ebighi ebi, na-akpo Mmuo Nso, onye nwe anyi nke na-enye ndu, ma tukwasi obi na nzoputa nke aha Jisos na obara Ya nke dikwa oke oke, ekwenyesiri m ike na umuaka nile ndi aka hapuru ndu site na ite ime, a sachara ha n'ọbara Jizọs ma bụrụkwa ezigbo ndị okwukwe nwụrụ anwụ bụ ndị "na-ebi n'ime Onyenwe anyị" (1), ebe ha natara baptism nke nzọpụta n'ime ọbara. Biko, Nna bi N’igwe, n’ịtụle maka ịgba ama nkịtị nke enyere okwu nsọ Gị, nke gbochiri igbu ndị aka ha dị ọcha, inye, site na ịrịọchitere Meri, Nne nke Zoro Ezo na Mystical Ogbugbu, nke St. Joseph, nke St. John Baptist na ndị nwụrụ n’ihi okwukwe ya na ndị nsọ niile, ka ndị ụka nta a nke ndị nsọ na-emeghị ihe ọjọọ nabata ha site n’aka ndị nne ụka ka nne wee nwee ike ịba ụba nke ọma bara uru dị n’ime okwukwe ha.
Ezigbo Onyenweanyị ejiri m obi ike na-arịọ gị, site na ịrịọchitere nke ọtụtụ nde ụmụaka nwụrụ n'ihi okwukwe ha, ndị mmụọ ozi ha na-eche ihu gị, ka m nye m: .. (kwupụta amara ị chọrọ).
Nna Pụrụ Ime Ihe Niile, kwe ka akaebe ha na-enye Ọkpara Gị nke bụ Jizọs Kraịst, onye bụ Wayzọ, Eziokwu na Ndụ, ka a na-enye ha olu na Nzukọ Uka niile iji kpọsaa mmeri ya nke ọma karịa mmehie na ọnwụ. Ka ogbugbu ha nye ka uwa gbaa ama zuru oke na Eziokwu na nkuzi nke Holy Catholic Church maka nzoputa nke nkpuru obi na ebube ebighebi nke Holy Trinity.
Oh, Jesus m, Chineke dị ọcha, mmeri nke akpọgidere n'osisi nke ndị Amens ahụ. Rịba ama
(1) Pope John Paul II, Encyclical Evangelium Vitae, 1999. will ga-aghota na o nweghị ihe na-efufu, ị nwekwara ike ịrịọ mgbaghara maka nwa gị nwoke, onye bi ugbu a n'ime Onyenwe anyị.